Fahatsiarovana An’i Samad Behrangi, ilay Mpanoratra Nanainga Fanahy Iraniana Revolisionera Tsy Tambo Ho Isaina · Global Voices teny Malagasy
Fahatsiarovana An'i Samad Behrangi, ilay Mpanoratra Nanainga Fanahy Iraniana Revolisionera Tsy Tambo Ho Isaina
Voadika ny 05 Septambra 2016 14:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Nederlands, Ελληνικά, English
Samad Behrangi, teraka ny 24 Jona 1939; maty ny 31 Aogositra 1967. Sary: Alchetron Encyclopedia.
Ny 31 Aogositra no manamarika ny faha-49 taona nahafatesan'ilay Iraniana-Azerbaijana mpanoratra, Samad Behrangi. Na amin'izao fotoana izao aza, efa ho 50 taona taorian'ny nahafatesany, dia mbola tononin'ireo Iraniana gadra politika sy ny mpikatroka izay manohy miady amin'ny sivana, ny fahantrana ary ny tsy rariny ao amin'ny tanindrazany ireo teny sy hevitr'i Behrangi. Na dia fohy aza ny fiainany, dia mbola miteraka aingam-panahy amin'ny mpanoratra maro avy amin'ny sarangam-piainana samihafa amin'izao fotoana izao ny lova napetrak'i Behrangi.
Teraka tany TabriZ, tanàna any avaratra, tao amina fianakaviana Azeri-Tiorka (iray amin'ireo vondrona vitsy an'isa lehibe indindra any Iràna) i Behrangi. Lasa mpampianatra teo amin'ny faha-18 taonany i Behrangi, ary nanomboka ny asa fampianarana tany amin'ireo tanàna ambanivohitra Iraniana-Azerbaijana. Ny fepetra mahonena iainan'ireo sekoly sy ny tsy fahampian'ny ho enti-manan'ireo mpianany dia tsy hoe nanamafy an'i Behrangi fotsiny, fa mainka koa nanome azy finiavana handroso hatrany.
Ny tena nampalaza an'i Benghari angamba dia ilay tantara fohy nosoratany, Mahi Siayeh Kochooloo, na Ilay Trondro Mainty Kely, izay manaraka ny dian'ny trondro kely iray mankany amin'ny ranomasimbe midadasika. Ny tantara dia vakiana toy ny anganon'ankizy, nefa mandalina fihaonana eo amin'ny fitomboan'ny taona sy ny fampandrosoana ara-politika ary ny fahatsiarovantena ara-tsosialy. Ny mpandray anjara fototra ao amin'ny tantara dia miatrika faniriana mitohy te-hanadihady ny fiainana ivelan'ny zava-misy atrehiny, ary hahita raha misy fiainana iray hafa tena azo iainana. Noraràn'ny Shah ao Iràna ilay tantara taty aoriana..
Ny fonony voalohany hoan'ny boky Ilay Trondro Mainty Kely ,nivoaka tamin'ny 1967. Ny fanaingoana nataon'i Farshid Mesghali dia nandrombaka loka maro, anisan'izany ny lokan'i Hans Christian Andersen tamin'ny 1974. Sary Wikipedia
Tsy afa-po tamin'ny fitaovana nomena ny sekoly ambanivohitra, niezaka nanamboatra fitaovam-pampianarany azy manokana i Behrangi, ny tanjony dia hamorona zavatra maneho bebe kokoa ny tena zava-misy mahazatra ny ankizy any ambanivohitra. Noraran'ny governemantan'ny Shah ny famoahana fitaovana tahàka izany. Niatrika fampiatoana sy fandrahonana amin'ny maha mpampianatra azy i Behrangi nandritra ny fiainany, noho ny heviny ara-politika..
Nisafidy ny hanoratra amin'ny teny Azeri, nanoratra fanadihadiana fanakianana momba ny rafi-panabeazana ao Iràna i Behrangi, tantara ho an'ny rehetra, tantara fohy, ary nandika ny asan'ireo Iraniana poeta sy mpanoratra. Niezaka koa i Behrangi nanangona sy nanoratra andian'angano ho an'ny vahoaka Azeri sy tantara ho an'ny ankizy, nefa voarara indray ny famoahany ireny tamin'ny tenindrazany..
Marksista i Behrangi, tia mampianatra, mpitsikera ara-tsosialy, mpanoratra mahay mamorona, ary ambonin'izany rehetra izany mpandinika maka avy amin'izay rehetra takatry ny tànany. Anisan'izany ny fitondrana fitondram-panjaka izay nanohana ny fanavaozana, fa zara raha nanao zavatra kely mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny ambany saranga any Iràna. Io tsy hafaliana tsy nitsaha-mitombo io dia nanomboka niparitaka teo amin'ny fiarahamonin'ireo nahita fianarana, anisan'izany ireo tanora Iraniana, toa an'i Behrangi izay nandray fiovàna ifotony.
Iray amin'ireo bokiny malaza indrindra (ary tena tiako manokana) ny Kachale Kaftarbaz, na “Baldy, ilay Mpiandry Voromahailala” (nambara am-bava indray ao anatin'ny rakitsary etsy ambony). Ny tantara dia mihodina amin'i Kachal (Baldy), sy ny tolona nataony nanohitra ny mpanjaka mpanao didijadona. Ny mpandray anjara fototra, izay sola, mahantra ary mitokatokana, tsy nanenjika harena na fahefana. Nanana fahasahiana nitsangana nanohitra ny herisetra fampahorian'ny mpanjaka i Kachal, no sady nitàna ny fahatsorana sy fahamarinam-piainany. Tanaty zavatra iray mahatsikaiky, dia nampiasa ny voromahailalany koa izy handraraka tain'osy teny ambonin'ny lohan'ireo miaramilan'ny mpanjaka – mahatsikaiky nefa misoko mangina ho fanomezam-boninahitra ny maha-ara-drariny ny ady mitam-piadiana manohitra ny jadona.
Ity tantara ity, toy ny maro amin'ireo anganon'i Behrangi, dia ahitana ny hatsikana sy ireo fahitàny ny haizin'ny fiarahamonina, anisan'izany ny fanehoankevitra an-kolaka momba ny tsy fitoviana, fampiasana ny tany, ary ny zon'ny vehivavy. Ireo asasorany koa dia miavaka satria mitàna ny fomba mahazatra ny olona, satria ny vontoatin'ny tantara dia mandrava ny fitsoahana ny zava-misy izay mahazatra amin'ny toy izao; raha tokony hifantoka amin'ny rariny ara-piarahamonina, na dia ambonin'ny hasambarana sy ny filaminan'ny tena aza.
Ny fomba fanoratr'i Behrangi dia mampahatsiahy an'i Miguel de Cervantes, amin'ny fahaizany mampifangaro ny singa tsy mitombina sy ny manafinaritra amin'ny tsikera ankolaka momba ny fiarahamonina sy ny toe-javatra misy hatrizay. Toa an'i Cervantes, mampiasa hatsikana sy eson-teny koa i Behrangi amin'ireo tantarany izay toa tsy mamely mafy mba haneho fanakianana ankolaka nefa manindrona momba ny fiainana teo ambany fitondran'ny Shah ao Iràna. Manantena i Behrangi amin'ny fampiasany ireo teny ireo fa miady ho an'ireo tena tratry ny fahantrana sy tsy fitoviana any Iràna.
Miavaka tokoa i Behrangi, tsy noho ny heviny ara-politika sy ny eritreritra foroniny ihany, fa ilay fombany miavaka sy ny fomba fanoratra izay takatry ny sarambabem-bahoaka. Ireo hevitra sy voambolany dia naseho amin'ny fomba ahitana taratra ny fomba firesaka iraisan'ny be sy ny maro. Mifantoka amin'ny zava-misy mafy amin'ny fiainana ao anatin'ny tontolo tsy mitovy ny tantarany. Ny tena tanjon'izy ireny voalohany dia ny hanome torohevitra sy fampahatsiarovan-tena ny ankizy madinika, ary taridàlana mba handresy ny ratsy izay atrehin'izy ireo.
Nitady ny handrava ilay fitantarana mahazatra atao amin'ny bokin'ny ankizy i Behrangi, ary ho solon'izany dia hanolotra kosa torolalana mba ho fitaovana hiatrehana ny fiovana ara-tsosialy:
Tsy fotoana intsony izao hamerana ny literatioran'ny ankizy ho amin'ny torohevitra maina sy jadona ary toromarika toy ny hoe ‘sasao ny tananareo sy ny tongotrareo ary ny vatanareo’, ‘arao izay lazain'ny reninareo sy ny rainareo ary ny zokinareo'… Tsy tokony hiteny amin'ny ankizy ve isika hoe ao amin'ny firenenareo, misy ankizilahy sy ankizivavy izay tsy mbola nahita hatramin'izay niainany sombina hena teo an-doviany? Tsy tokony hiteny amin'ny ankizy ve isika hoe mihoatra ny antsasaky ny olona eran-tany no noana, ary nahoana no noana izy ireny, ary ahoana no hampihenàna ny hanoanana?
Anisan'ny nanamafy ny satan'i Behrangi ho anisan'ireo olo-malazan'i Iràna nandritra ny vanimpotoana nitondra ho tamin'ny revolisiona 1970 ny fahafatesany tampoka sy mifono zava-miafina. Ny tatitra dia milaza fa maty an-drano tao amin'ny reniranon'i Aras i Behrangi ny 31 Aogositra 1967. Tamin'izany fotoana izany, maro no nino fa tsy vokatry ny loza ny fahafatesany, ary ny fanehoankevitra iraisan'ny maro dia manohana fa ny polisy miafin'ny Shah, ny SAVAK no nikotrika ilay famonoana azy. Ny hafa indray nilaza fa loza tsotra izao ilay naha-dobo an-drano azy..
Ilay fahafatesany tsy voajanahary dia nanandratra ny satany ho toy ny martiora, manatevin-daharana ireo mpandinika malaza sy mafana fo izay maty tamin'ny toe-javatra hafahafa nanditra io vanim-potoana io ihany, anizan'izany Ali Shariati, Gholamreza Takhti, ary Forough Farrokhzad. Ny endriny dia lasa mariky ny fanoherana ny fitondrana, ary ny asa sorany dia sady hitarika no handrisika andian-taranaka iray.
Ireo iraniana mpanohitra mitazona ny sarin'i Samad Behrangi. Daty tsy fantatra. Sary: Alchetron Encyclopedia.
Tao anatin'ny folo taona nahafatesany, ny tanora Iraniana dia nikarakara sy nitarika hetsika nanerana ny firenena hanoreherana ny Shah tanatin'izay fantatra amin'ny hoe “revolisiona malaza indrindran'ny vaninandro maoderina‘. Anisan'izany ny hery avy amin'ny ankavia izay naka aingam-panahy avy amin'i Behrangi, miaraka amin'ireo hafa avara-pianarana sy mpandinika.
Ny teny sy ny hafatr'i Behrangi dia sady manankarena no matanjaka amin'izao fiainana izao sy mandrakizay. Amin'ny tsingerintaonan'ny nahafatesany, dia azontsika atao ny mieritreritra indray ireo hafatra navelany ao amin'Ilay Trondro Mainty Kely:
Mety hiatrika fahafatesana isa-minitra aho ankehitriny! Saingy tokony hiezaka anefa aho mba tsy hampidi-doza ny tenako mandritra ny fotoana iainako. Mazava ho azy, tsy dia zava-dehibe raha maty aho, satria izany hitranga ihany na amin'ny fomba ahoana, na aamin'ny fomba ahoana. Fantatro ny tanjoko: ny tanjoko dia: Ahoana no hampisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny hafa ny fahavelomako na ny fahafatesako?